​पूजालाई पनि भिलेन बन्ने रहर ! भन्छिन्, ज्यान बनाएर आउँछु
Sun, Apr 22, 2018 | 18:12:09 NST
19:18 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, चैत २७ – अभिनेत्री पूजा शर्मा सिनेमा ‘प्रेमगीत’ पछि नेपाली दर्शकमाँझ गीतको रुपमा परिचित भइन् । उनलाई सबैले ‘गीत’ भनेर सम्बोधन गर्न थाले । अझ भन्ने हो भने ‘प्रेमगीत’ पछि उनलाई नेपाली सिनेमाकी ‘लभर गर्ल’को रुपमा पनि चिनिन्छ । पूजालाई पनि अरुले आफूलाई ‘लभर गर्ल’का रुपमा हेरिदिँदा निकै खुसी लाग्छ । हालै मात्र छुल्ठिम डोल्मा गुरुङले निर्माण गरेको सिनेमा ‘डायरी’को ट्रेलर लन्च इभेन्टमा पुगेकी पूजाले नायिका रेखा थापालाई सिनेमामा भिलेनको रुपमा देख्दा आफूलाई पनि भिलेन बन्न मन लागेको कुरा व्यक्त गरेकी छिन् । रेखा थापाले ‘डायरी’बाट भिलेनको रुपमा सिनेमा उद्योगमा डेब्यु गर्दैछिन् ।
पूजा अहिले नै भिलेनको रुपमा सिनेमामा प्रवेश गर्ने सोचमा भने छैनन् । उनी अझै केही वर्ष ‘लभर गर्ल’कै रुपमा सिनेमा उद्योगमा टिक्न चाहन्छिन् । केही वर्ष पछि अलि ज्यान पनि ज्याङ्गो बनाएर अरुले हेर्दा वाह ! ल ठिक छ यो भिलेनमा सुहाउँछे भन्ने भएपछि मात्रै भिलेनको रुपमा देखा पर्ने सोचमा छिन् ।
तत्कालका लागि ‘लभर गर्ल’कै परिचयले खुसी उनले ‘प्रेमगीत’ पछि पाएको ‘लभर गर्ल’को परिचयलाई आगामी सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले पनि कायम राख्ने विश्वास राखेकी छिन् । किनकी यो सिनेमा पनि एक म्युजिकल लभ स्टोरी हो, जहाँ उनी छायाँको भूमिकामा देखा पर्दैछिन् ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’को लगि बने ९ वटा गीत, ३ वटामात्रै पास
पूजा शर्मा र पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’मा तीनवटा गीत समावेश भएको र गीतहरु निकै नै राम्रो भएको पूजाले हामीलाई जानकारी दिइन् ।
संगीतकार अर्जुन पोखरलेले यो सिनेमाका गीतमा निकै मेहनत गरेका छन् । अर्जुनले ‘प्रेमगीत’को लागि बनाएको ‘म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेमगीत बनोस्’ निकै नै लोकप्रिय बन्यो । उनैले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’कोे लागि ९ वटा गीतहरु बनाएका थिए ।
जसबाट तीनवटा गीतहरु छनौट गरेर सिनेमामा राखिएको छ । दर्शकहरुले पनि यो सिनेमामा समावेश भएका गीतहरु सुन्न निकै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा दिईरहेका छन् जसले पूजालाई काममा निकै हौसला प्रदान गरेको छ ।